हारेपछि भोट किनेको पैसा फिर्ता माग्दै माओवादी उम्मेदवार- यी व्यक्तिले गरे यस्तो खुलासा (भिडियो सहित) – Ap Nepal
अधिकांश स्थानीय तहको चुनावी परिणाम सार्वजनिक भइसके को छ। कतिपय स्थानीय तहका उम्मेदवार, मतदाता र समर्थक अन्तिम चुनावी नतिजाको पर्खाइँमा छन्। योसँगै स्थानीय निर्वा चनको माहोल विस्तारै सेलाउँदै गएको देखिन्छ। यतिबेला गाउँ देखि शहरसम्म जित्नेहरू उत्साहित छन्। हार्नेहरू निराश।
यही माहोलमा रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकामा भने बेग्लै प्रसंगले स्थानीय त्रसित छन्। कारण हो– एक कार्यकाल सत्ता सम्हालेर फेरि चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट पराजित भोगेको माओ वादी केन्द्रका उम्मेदवारकाे व्यवहार।
चुनावअघि मत खरिदका लागि स्थानीय मतदा तालाई पै सा बाँडेका माओवादी केन्द्र गंगादेव–५ बाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मानबहादुर डाँगी अहिले गाउँ–गाउँमा पुगेर आफूले दिएको रकम फिर्ता दिन दबाब दिइरहेका छन्
उनी आफैँ र सहयोगीमार्फत् गाउँ–टाेलमा पुगेर पैसा फिर्ताको लागि स्थानीयमाथि दबाब दिएको एक भिडियो सार्वजनिक भएकाे छ।
उता स्थानीयले आफूलाई जवर्जस्ती पैसा दिएर अहिले फिर्ता मागिरहेको बताउँछन्। ‘हारेपछि पैसा खायो भनेर बदनाम गरे। मैले त्याेबेला पैसा लिएँ। माओवादीलाई भोट हालिनँ,’ स्थानीय तुलाराम वली बताउँछन्।
कति स्थानीयले त्यो पैसा फिर्ता दिइसके। कति पय दिने चर णमा छन्। माओवादी कार्यकर्ताकाे पैसा उनैलाई फिर्ता गर्न तम्तयार रहेकाे उनीहरू बताउँछन्। चुनावमा मतदाता बिक्छन्। पैसामा लोभिन्छन्। उनीहरू स्वतन्त्र ढंगले भोट हाल्न पाउँ दैनन्। त्यसो हुँदा योग्य र सक्षम उम्मेदवारले चुनाव हार्छन्। ‘पैसा पेल्नेले चुनाव जित्छन्’ प्राय मानिसको पछिल्लो गुनासो यस्तै हुन्छ।
आफूलाई मात्रै होइन, माओवादी कार्यकर्ताले स्थानीय खिमु खत्री र भीमबहादुर वलीलाई पनि पाँच–पाँच सय रुपैयाँ दिएको उनकाे दावी छ। तर माओवादी उम्मेदवारले चुनाव हारेको भोलि पल्टै खिमुले पैसा जोबाट पाए, उसैलाई फिर्ता दिइसकेका छन्।
मतदानपूर्व आफूलाई माओवादीका उम्मेदवार मानबहादुर डाँगी र स्थानीय कार्यकर्ता बालाराम वलीले एक हजारमा किनेको तुलाराम बताउँछन्।
तर मतगणना सकिएपछि भन्छन्, ‘भोट माग्न सबै उम्मेदवारहरू आए। सबैलाई भोट दिन्छम् पनि भनियो। बालाराम र मानबहा दुर आएर राख्दिनँ भन्दाभदै हजार रुपैयाँ दिए। भोट किन्नलाई होइन, चियापानी खानु भनेर गए। हारेपछि पैसा खायो भनेर बदनाम गरे।’
एक कार्यकाल स्थानीय सत्ता चलाएको माओवादी केन्द्र यो निर्वाचनमा कांग्रेससँग पराजित भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष बीरबहादुर केसी फेरि
माओवादीबाट अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनेका थिए। तर उनी तेस्रो स्थानमा पुगे। उनै बीरबहादुरलाई एमाले, कांग्रेस र स्वतन्त्रका प्रतिनिधिहरू निर्वाचनमा व्यापक पैसा बाँडेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
बाँकी तलको भिडियोमा हेर्नुस
Prevकाठमाण्डौ महानगरपालिकामा ५४ हजार ४ सय ८९ मत गन्दा यस्तो छ उम्मेदवारहरूको प्राप्त मत
Nextमिदी प्रहरी भन्ने नवराज मिडियामा, भन्छन् प्रहरीमा लागेर देशको सेवा गर्ने …( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
आज घट्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति घट्यो त ?
बिचरा ! दुबईमा एक युवकको बिजोक अवस्था, “म मर्छु भन्दै घरमा फोन आउछ”, श्रीमती डाको छोडेर रुँ दै मिडियामा (भि डियो सहित)
हवाईभाडा बसकै बराबरीमा आयो , हेर्नुहोस् कुन ठाउँको भाडा कति ?